Viki Premium Apk Download ho an'ny Android [2022 farany]
Eto izahay miaraka amin'ny iray amin'ireo fampiharana Android malaza indrindra, izay fantatra amin'ny hoe Viki Premium Apk. Io no pass maimaimpoana hafa ary manome anao fidirana tsy voafetra. Manolotra ireo sary mihetsika sarimihetsika sy fahitalavitra malaza any Asia izay malaza sy mahatalanjona.
Araka ny fantatrao dia manolotra indostrian'ny fialamboly tsara indrindra i Azia, saingy noho ny farihy loharanon-karena, tsy mila mandefa azy io ny olon-kafa. Noho izany, Viki dia sehatra iray, izay manolotra ny atiny farany farany amin'ny indostria tsara indrindra ho anao. Izy io dia olana lehibe sasany amin'ity rindrambaiko ity.
Ny voalohany dia manolotra fisedrana maimaimpoana fito andro ho an'ny mpampiasa izy rehetra, midika izany fa mila mandoa ianao aorian'ny fotoana fitsapana. Mila mividy pass ianao raha te hiditra amin'ny fampiasana azy io. Ny olana faharoa dia ny Ads. Manolotra mipoitra doka maro izy amin'ny fotoana rehetra, izay mahatonga azy tsy mahafinaritra.
Olana iray hafa ny kalitaon'ny sary. Tsy manohana HD feno izy io. Mila mividy pass ianao raha te hahazo fidirana feno. Ka izahay no nitondra an'ity rindranasa ity, izay manolotra fisehoan-javatra mahavariana kokoa ao anatin'izany ny pass mba hidirana aminy. Hizara ny momba an'ity rindranasa ity izahay. Noho izany, mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy.
Izy io dia rindrambaiko fialamboly Android, izay manome fidirana tsy voafetra amin'ny fialamboly aziatika. Manolotra sarimihetsika koreanina, taiwan, japoney, sinoa, ary firenen-kafa an-taonina maro izy io, ary misy koa ny andian-tranonkala. Afaka mahita ny sasany amin'ny malaza indrindra, tantara an-tsary sy sarimihetsika eto ianao.
Viki pass Apk koa dia manolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra any amin'ireo firenena Aziatika rehetra ireo. Azonao atao koa ny mahita ny sasany amin'ireo seho fahita lavitra eto, izay tena tsy misy eny an-tsena. Izy io koa dia manome fizarana misaraka, izay mifanaraka amin'ny marika na zom-pirenena.
The Movie App tsy manome feo navoaka na inona na inona. Saingy manolotra dikanteny amin'ny fiteny samihafa ho an'ny mpampiasa izy io, izay manamora kokoa ny fahazoana azy ireo. Ny endri-javatra fanampiny atolony dia fampisehoana kalitao HD feno, izay tsy hita amin'ny dikan-tany voalohany.
Manolotra tsikera momba ny atiny samihafa ihany koa izy ity, izay hahatonga ny hafa haminavina an'io horonan-tsary io. Manome sehatra fifanakalozan-kevitra ihany koa izy io, izay iadian'ny olona eran'izao tontolo izao ny fivoarana na ny fomba fijerin'izy ireo manokana momba an'ity sehatra ity na ny atiny manokana.
Manome atiny manokana ao amin'ny Viki ihany koa izy io, izay misy indrindra ho an'ireo mpampiasa karama. Azonao atao ny miditra amin'ireo endri-javatra rehetra amin'ny alàlan'ity pass maimaimpoana ity ary mankafy streaming tsy misy fetrany. Raha manana olana ianao amin'ny fisintomana ity rindranasa ity dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny fizarana hevitra.
Anaran'ny fonosana com.viki.android
Endri-javatra manan-danja amin'ny Viki Rakuten Premium Apk
Misy endri-javatra maro kokoa amin'ity fampiharana ity izay azonao zahana. Ny sasany amin'izy ireo dia voatonona ao amin'ny fizarana etsy ambony ary hizara ny lisitry ny fiasa lehibe aminao eto ambany izahay. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana hevitra.
Sarimihetsika, fandaharana amin'ny fahitalavitra ary andian-tranonkala avy any Azia
Subtitle amin'ny fiteny Multiply
Ny Servers High dia manao fifandraisana tsy voavaky
Ahoana ny fomba fampidinana ny Viki Premium Apk?
Araka ny fantatrao, tsy misy ao amin'ny Google Play Store ireto karazana fampiharana ireto. Noho izany, mizara rohy azo antoka sy miasa amin'ity rindranasa ity izahay. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity.
Tsindrio eo ary miandry segondra vitsy dia hanomboka ho azy ny fampidinana. Rehefa vita ny fampidinana dia aza adino ny mamela ny 'Loharano tsy fantatra' avy amin'ny Setting Security alohan'ny hanombohan'ny fametrahana.
Viki Premium Apk no fampiharana tsara indrindra, izay manolotra fanangonana fialamboly aziatika goavambe. Afaka mahita sarimihetsika, fandaharana amin'ny fahitalavitra, andian-tranonkala ary maro hafa ianao. Maimaimpoana ireo serivisy rehetra ireo. Noho izany, ampidino fotsiny ity rindrambaiko ity ary manomboka mampiasa endri-javatra tsy voafetra. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny Website.
Sokajy Apps, Entertainment Tags Movie App, Viki Pass Apk, Viki Premium Apk, Viki Rakuten Premium Apk Post Fikarohana
Cricket Captain 2020 Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android
Misintona APK Batau ho an'ny Android [Nohavaozina 2022]
1 hevitra momba ny "Viki Premium Apk Download ho an'ny Android [2022 farany]"
Novambra 4, 2021 amin'ny 11: 51 am
Je suis français, et j'ai bien-sûr télécharger cette application. Mais après m'être connecté, je n'ai pas accès à certains épisodes (qui eux était payant avent d'installer cette application). Pouvez-vous m'aider dans ce petit problème.